सुन्तला खानुको १० फाइदाहरु…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
कार्तिक २६, २०७७ बुधबार 0
काठमाडौ : कतिपय मानिसमा चिसोमा सुन्तला खानु हँदैन भन्ने धारणा छ। तर चिसो मौसम र चिसो ठाँउमै फल्ने सुन्तलाको महत्व छुट्टै छ । सुन्तला स्वादकालागि मात्र नभइ स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अत्यन्तै लाभदायक छ।
मानिसहरू सुन्तलाभन्दा भिटामिन चक्कीतिर आकर्षित भइरहेका छन् । सुन्तला भिटामिन ‘सी’को प्रमुख स्रोत हो। भिटामिन चक्कीको सट्टा सुन्तला खानु स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुवै हिसाबले फाइ’दाजनक हुन्छ । बढी तौल भएका व्यक्तिकालागि पनि पर्याप्त मात्रामा सुन्तलाको प्रयोग उत्तम हुन्छ। सुन्तलाको फल मात्र होइन बोक्रा पनि उत्तिकै फाइदाजनक हुन्छ ।
सुन्तलामा रहेका विभिन्न सुक्ष्म पौष्टिक तत्व भिटामिन ए, बी र सीले शरीरको रोग प्रति’रोधात्मक शक्ति बढाउँछन् । बिरामी भएको व्यक्तिलाई खान मन नलाग्दा सुन्तलाको थोरै रस खुवाँउदा खानामा रुची बढ्छ । सुन्तलाको छो’क्रामा प्रसस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ । यसले पेट सफा राख्न मद्दत गर्छ ।
बालबालिकालाई झाडा पखालाले सताएको समयमा सुन्तलाको रस थोरैथोरै गरेर दिइयो भने बिरामीको शरीरलाई चाहिने पानीलगायत अन्य तत्वको आपूर्ति हुन्छ । गिँ’जाबाट र’गत बग्ने समस्यामा पनि सुन्तला लाभदायक हुन्छ । त्यस्तै सुन्तलामा रहेको क्याल्सियमले दाँतलाई स्वस्थ र मजबुत बनाउँछ ।
बजारमा पाइने कृतिम पेयपदार्थ भन्दा मौसम अनुसार पाइने फलफूल खानु स्वास्थ्यकालागि औ’षधि समान हो । सुन्तलाको बोक्रामा पनि पौष्टिक तत्व हुन्छ । सुन्तलाको बोक्रा सुकाएर मसिनो पारेर काटेर चिनीमा हालेर पकाएर बालबालिकालाई खुवाउनु निकै लाभदायक हुन्छ । त्यसैगरि सुन्तलाको बोक्रा सुकाएर धुलो पारेर अनुहारमा लगाउनाले अनुहारको छाला सफा र नरम हुन्छ ।
क्यान्स’रको जो’खिम घटाउँछ
सुन्तलामा साइट्रस लिमो’नोइड्स प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले छाला, फोक्सो, स्तन, पेट र मलाशयमा हुने क्यान्सर लाग्ने जो’खिम घटाउँछ ।
सुन्तलामा क्यारोटेनो’इड्स नामक तत्व पाइन्छ, जसले कलेजोको क्या’न्सर हुनबाट जोगाउँछ ।
सुन्तलामा फा’इबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले शरीरमा कोलेस्टरोलको मात्रा घटाउँछ ।
सुन्तलामा पोटा’सिमय र इलेक्ट्रो’लाइट मिनरल हुन्छन् । यिनले मुटुको गतिविधिलाई सुचारु राखी यसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पु¥याउँछन् । पोटा’सियमको कमीले मुटु’सम्बन्धी रोग लाग्ने गर्छ । जुन सुन्तला खानाले रोकिन्छ ।
भाइरल इन्फे’क्सन हटाउँछ
सुन्तलामा पोलि|फेनोल्सजस्ता तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । यी तत्वले रुघाखोकीजस्ता भाइरल इन्फे’क्सनबाट जोगाउँछन् ।
कब्जि’यतको समस्या छ भने सुन्तला खाने गर्नुस्, दिसा खलास हुन्छ । यसमा फाइबरको मात्रा उच्च हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ ।
सुन्तलामा पाइने भिटामिन–ए, क्यारोटे’नोइडजस्ता तवले आँखालाई तेजिलो बनाउँछन् र रतन्धोजस्तो समस्या देखापर्न दिँदैनन् ।
रक्तचाप निय’न्त्रण गर्छ
सुन्तलामा पाइने फ्ला’भोनोइड हे’स्पेरिडिन र म्याग्ने’सियमले उच्च रक्तचा’पलाई निय’न्त्रण गर्छ ।
सुन्तलामा बेटा–क्या’रोटिन पाइन्छ । यो उत्तम एन्टी अक्सिडेन्ट हो । यसले छालालाई चम्किलो बनाउँछ ।
Prevआफ्नैले पनि साथ छोडे, साथ दिनेले कुरा मोडे – अफ्ठे’रोमा ओली !
Nextप्रचण्डलाई ‘घर–पार्टी अफिस, पार्टी अफिस–घर’ जानबाहेक लखर–लखर हिड्न प्र तिबन्ध लगाउनुपर्छ…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौँ महानगरभित्र रोकिएको कोभिडविरुद्धको खोप भोलिदेखि (12)
४.	वाइफाइ कमजोर छ ? अपनाउनुस् यी तरिका (12)
५.	काठमाडौँ महानगरभित्र रोकिएको कोभिडविरुद्धको खोप भोलिदेखि (12)